November 8, 2018 Falastiin Axmed WARARKA MAANTA Comments Off on DEG DEG: Qarax ka dhacay Muqdisho
Qarax loo adeegsaday gaari lagu xiray waxyaabaha Qarxa ayaa goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhow Beerta Nabadda dhanka Hoteel Muno, waxaana jira Khasaare ka dhashay Sidda Risaala u xaqiijiyeen goobjoogayaal.
Gaariga ayaa yaallay meel Labaajo ah oo lagu dhaqaayay, waxaana la sheegay in uu ku dhintay Tuux dhaqaayay, waxaa sidoo kale jira Dhaawacyo.
Goobta uu Qaraxu ka dhacay ayaa waxaa qabsaday Uuro iyo Qiiq xooggan, waxaana hadda socda badbaadinta dadkii ay waxyeelado soo gaartay.
Madaxweyne Farmaajo Oo Shir Ugu Qeyb Galaya Dalka Itoobiya
703,839 total views, 1,056 views today
703,839 total views, 1,056 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
703,715 total views, 1,056 views today
703,715 total views, 1,056 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
703,745 total views, 1,056 views today
703,745 total views, 1,056 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
703,807 total views, 1,056 views today
703,807 total views, 1,056 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
703,861 total views, 1,056 views today
703,861 total views, 1,056 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]